किन पठायो अमेरिकी दूतावासले गृहमन्त्रीलाई चिठी ? « Pahilo News
किन पठायो अमेरिकी दूतावासले गृहमन्त्रीलाई चिठी ?
प्रकाशित मिति : 11 July, 2018 2:53 pm
काठमाडौ, २७ असार । यातायातको क्षेत्रमा वर्षौंदेखि विद्यमान सिन्डिकेट हटाउने, समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नेजस्ता कामका कारण राम्रो छवि बनाएका केपी ओली नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चालेको अर्को एक कदमप्रति अमेरिकी दूतावासले लिखित असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकारको नीति तथा कामप्रति कुनै असन्तुष्टि भए परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक तरिकाले आफ्नो राय राख्नुपर्नेमा अमेरिकी दूतावासले गत बिहीबार सिधै गृहमन्त्रीलाई चिठी लेखेर आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । अर्बौं रूपैयाँको कारोबार गर्ने एनजीओ आईएनजीओहरूलाई गृह मन्त्रालयले निगरानीमा राखेलगत्तै दूतावासले मन्त्रीलाई चिठी लेखेर प्रश्न सोधेको हो । विश्वस्त सूत्रका अनुसार दूतावासले मन्त्रीलाई पठाएको चिठीमा ‘हामीलाई नसोधी किन एनजीओ आईएनजीओमाथि निगरानी बढाइएको हो भनी प्रश्न सोधिएको छ ।
दूतावासले यसरी चिठी पठाएपछि मन्त्रालयले पनि राजदूतलाई मन्त्रालयमै बोलाएर स्पष्टीकरण लिने तयारी गरेको छ । स्रोतले भन्यो, अब केही दिनभित्रै राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर चिठी पठाउनका कारण र एनजीओ आईएनजीओको लगानीमाथि सरकारको नीतिबारे बताउने तयारी भइरहेको छ । त्यसो त आईएनजीओ लगानीप्रति वर्तमान सरकारले कठोर नीति लिने बताएसँगै गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूदेखि मन्त्रीसम्मले दबाब थेग्न मुस्किल परेको थियो । सामाजिक सेवाको आवरणमा कार्यसञ्चालन स्वीकृति पाएका अन्तर्र्रािष्ट्रय गैरसरकारी संस्था आईएनजीओको सवा ७४ अर्ब रूपैयाँ रकममा निगरानी थालेलगत्तै त्यसको अनुसन्धान रोकेको छ । सत्ताधारी पार्टीकै कार्यकर्ताहरूनै धेरै एनजिओ आईएनजीओमा क्रियाशील रहेका कारण त्यसको अनुसन्धान रोकिएको स्रोतले जनाएको छ ।